किन पिउने तामाको भाँडाको पानी ! - Nepal Sanchar
किन पिउने तामाको भाँडाको पानी !
१९ आश्विन २०७७, सोमबार ०४:०९
काठमाडौं । आजकल तामाको भाँडोको प्रयोग कम हुन थालेको छ । वृद्धहरूले तामाको भाँडोमा हालेर पानी पिएको देख्नुभएको होला । तामाको भाँडामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यसका फाइदा यस्ता छन् :
आज ३ मंसिर २०७७, बुधवार आजको राशिफल
दैनिक यी बानीले तपाईंको भविष्य बदल्नेछ
फोहोर सहकारीका गतिविधि गैरकानूनीः प्रशासन